European Championships: Dhibcaha Bahoku, laakiin Angers ma badin - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Koobka Yurub: Dhibcaha Bahoku, laakiin Angers ma badineyso
European Championships: Dhibcaha Bahoku, laakiin Angers ma badiso
Paris, Choupo-Moting ayaa gool ka dhaliyay Strasbourg, lakiin mar kale ayuu ahaa. Wadar ahaan, qaar ka mid ah ciyaartoyda Cameroon oo ka yimid Yurub ayaa u muuqday mid ciriiri ah, kuwa kalena way ka yaraayeen.
Weeraryahanka reer Cameroon Angelio Stephane Bahoken ayaa dhaliyay goolkiisii ​​sagaalaad ee xilli ciyaareedkan sabtida ee ay la ciyaarayaan Rennes, munaasabada maalinta 31e League 1. Kulankan ayaa ku dhamaaday barbaro dhex martay labada kooxood (3-3). Goolhayaha labaad ee Angevins, Stéphane Bahoken, oo ka soo laabtay dhaawac, ayaa aad u yareeyay intii uu ciyaarayay. Badanaa si xun ayuu ujiray inuu sidoo kale ka soo horjeeday goolka. Waxa uu bedelay Lopez daqiiqad 71th. Faransiiska maalinlaha ah ee Ouest France ayaa si kastaba ha ahaatee loo qiimeeyay 6.5 / 10 qiimeynta caalamiga Cameroon.
Dhanka Rennes, Franco-Cameroonian Gervinho Nyamsi ayaa lahaa habeen adag. Sannado yar oo ka fog xiddig adag oo soo jiidasho leh ayaa la arkay isagoo wajahaya Lyon. Waxaa laga yaabaa in daalku jiro laakiin xitaa meeleyntu waxay ka tageen si looga jawaabo Angers. Lea Siliki, oo ah kooxda kale ee Franco-Cameroonian Breton, oo wali ka soo kabanaya, ma aysan ka qeyb galin kulankaan.
Xiritaankan 31th ee Ligue 1 habeenkii Axadda, PSG waxaa lagu qabtey Strasbourg, 2-2. Weeraryahanka reer Cameroon PSG Choupo-Moting ayaa fiidnimadii hore u muuqday mid ciriiri ah. Taageeraha furaha ah bilawgii ciyaarta, wuxuu soo baxay mid ka mid ah ogyahay halka uu ku dhacay qolalka loo yaqaan "crampons" si uu ugu dambeyntii kubada ugu istaago line-ka goolka waxaana laga reebayaa PSG 2-1.
Choupo-Moting ayaa filanaya
Isagoo wajahaya saxaafada ciyaarta dhamaadka ciyaarta, xiddiga reer Cameroon ayaa ku guuldareystay inuu guul darreysto. "Waa xanuunsan laakiin ha ilaawin inaan goolka dhaliyey sidoo kale. Waan jecelnahay inaan ka hadalno arrimaha xun, waa sida tan, waa inaan aqbalnaa. Madaxa ayaan kor u qaadayaa. (...) Had iyo jeer way adag tahay in la sharraxo, si looga hadlo cadaadiska. Cadaadiska waa caadi, waxaan joogaa PSG, waxaan ahay weeraryahan, waxaan rajeyneynaa goolasha, ma ahan wax fudud. Qof kasta ayaa sugaya himilada, kaliya sii wad. Waxa ugu muhiimsan waa inaan badino kulamada. Burushka? Waa xorriyadda hadalka, qof kastaa wuxuu muujin karaa waxa ay u maleynayaan. Waan fahmay. Ka dib, waxaan nahay qoys weyn.
La Liga Spain, intii lagu jiray maalinka 31e, Real Betis ayaa ku guuleystay Villarreal 2-1, iyadoo ay uga mahad celinayaan Lo Clade (11e, 63e). Weeraryahanka Villareal Karl Toko Ekambi, oo ahaa ciyaaryahankii hore, ayaa fursad u helay inuu muujiyo naftiisa. Iyada oo guusha laga gaaray, Betis waa 9e. Villarreal waa 18e waana markii ugu horeysay ee aan la laaban karin. Isla mar ahaantaana, kooxaha Deportivo Alavés iyo Leganes waxay u kala baxsadeen dhibco dhexdhexaad ah (1-1). Daafaca midig Leganes Allan Nyom ayaa ciyaaray ciyaar buuxa.
Nederland, iskutallaabtu waxay sii socotaa madaxa Eredivisie. Ajax André Ako hadda keenaysaa horyaalka, iyadoo uu weerarka ugu fiican. Indeed, marka la gaaro dhamaadka maalinta 29e ciyaaray todobaadkan, Ajax dib ay furitaanka guul ballaaran (4-1) ayaa Sabtidii ka dhanka ah Willem II Tilburg ee mahad kasabtay, halka PSV Eindhoven, oo u baahday guushii Axaddii si uu u soo dhawaado, ayaa lagu qabtay jimicsi cajiib ah (3-3) oo ku yaal cawska Arnhem.
Scotland, kulankan Derby Edinburgh ayaa waxaa ku guuleystay Hibernian oo ka tirsan Heart of Midlothian (2-1). Arnaud Djom, xiddiga khadka dhexe ee kooxda Midlothian Cameroon ayaa ku daray kubad badan, lakiin dhamaadka xilli ciyaareedkan kuma filna. Sida xusuusin ah, shirkan waa mucaaradka u dhexeeya Heart, oo ay taageerayaan ku fasalada sare ee ku nool magaalada xaggeeda galbeed, iyo Hibernian, oo ay taageerayaan ku fasalada shaqada ku nool bari iyo koonfur ee Edinburgh.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/09/championnats-europeens-bahoken-marque-mais-angers-ne-gagne-pas/